Iindlebe Zokugqibela Zongeza Ukudityaniswa kweSpotify kwiQhosha loMlingo | Iindaba zeGajethi
Oku kunjengoko sibhengeze kumxholo ophambili wale ndaba, i-Ultimate Ears firm isongeze i Umdibaniso weSpotify yezixhobo ezineQhosha loMlingo elikhoyo, ekule meko ziiNdlebe zokuGqibela ze-BOOM 3 kunye neMEGABOOM 3.
Kodwa ayizukuvela njani le nto kwasekuqaleni okanye ukumiliselwa kwe-UE entsha? Ewe, isizathu asicacanga kodwa into ebesiyazi kukuba Iqhosha lomlingo lisebenza neApple Music kunye nePrimiyamu yeDeezerUkusukela oko yaqalwa kwaye kwakumangalisa ukuba ayisebenzi neSpotify, ngoku isebenza ngokupheleleyo. Ukongeza, inkampani ngokwayo ithi sele beceba ukongeza iinkonzo zomculo kwikamva elikude kakhulu.
Iindaba kule meko yilezangoku Abasebenzisi be-Android banokufikelela kuluhlu lwadlalwayo lweSpotify, iipodcast, kunye nokunye Ngokucofa eli qhosha longezwa kwiinguqulelo zamva zezithethi ze-UE. Amandla kunye nomgangatho kwimigca ngokubanzi yezi zithethi ngokungathandabuzekiyo yenye yamandla kodwa ukufika kweBOOM 3 kunye neMEGABOOM 3 inguqulelo yongeze iQhosha loMlingo ngoku elikuvumela ukuba ufumane okungakumbi kwisithethi.
Ukusuka kuhlobo lwe-Android 5.0 ukuya phambili
Kule meko, enye yeemfuno ukuze ukwazi ukusebenzisa lo msebenzi kwisixhobo sethu se-Android ayikho enye ngaphandle kokuba ihlaziyiwe kuhlobo lwe-Android 5.0 okanye ngaphezulu, ke kucingelwa ukuba phantse zonke izixhobo ziya kuba nakho ukonwabela oku uphawu. Singaqala kwaye silawule ngokulula iSpotify nokuba simamele iingoma entabeni okanye sisenza itheko eluphahleni, iindlebe zokugqibela zenza kube lula kunangaphambili ukufikelela kwiingoma zethu esizithandayo nokulawula isingqisho. I-CEO ye-Ultimate Ears uCharlotte Johs ngexesha lokwenza ezi ndaba esidlangalaleni:
Izithethi ze-BOOM 3 kunye neMEGABOOM 3 zitshintshile indlela esimamela ngayo umculo ngokulula kunye nokudityaniswa ngokulula kweQhosha loMlingo. Sisoloko songeza amanqaku amatsha kudidi lwethu lwesithethi sepremiyamu, kwaye i-BOOM 3 kunye neMEGABOOM 3 zihlala ziba bhetele ngokongeza inkxaso kwiSpotify kwizixhobo ze-Android.
Njengoko besichaza iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kuvavanyo esilenzileyo kwimveliso ye-Actualidad Gadget, i-BOOM 3 entsha kunye neMEGABOOM 3 yongeze iqhosha elibizwa ngokuba yiMagic Button evumela umsebenzisi ukuba adlale, eme kancinci kwaye atsibe imikhondo ngqo kwizithethi, ngaphandle kokuba ukukhangela ifowuni yakho epokothweni yakho okanye kwelinye igumbi. Ngoku abasebenzisi bezixhobo ezinenkqubo yokusebenza ye-Android kunye neakhawunti yenkonzo yokusasaza umculo, iSpotify, banokukhetha ukufikelela kumculo wabo nje cofa ixesha elide iqhosha kwaye ke ukuqala uluhlu lwadlalwayo abaluthandayo, iialbham, iingoma kunye neepodcast, kwaye banako nokuba tsiba uluhlu lokudlala ngokucofa kwakhona.
Ekuphela kwesidingo sokusebenzisa le nkonzo ukongeza ekubeni nohlobo lwe-Android 5 okanye ngaphezulu kwifowuni yakho kwaye ngokucacileyo ukuba uneakhawunti kwinkonzo yomculo esasazayo Spotify ukuyenza isimahla kwi-BOOM kunye nesicelo seMEGABOOM esisuka kwiiNdlebe zokugqibela. Le app inokukhutshelwa kwivenkile kaGoogle Play nakwiVenkile yeApple ngaphandle kwendleko kwaye ke uqala ukonwabela zonke iindlela ezinikelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Izithethi » Iindlebe zokugqibela zongeza ukudityaniswa kweSpotify kwiQhosha loMlingo